Summer - sekuyisikhathi ilanga, injabulo futhi aziphumulele. Bambalwa ngeke bayenqaba ukusebenzisa spare time sakho, ukujabulela ilanga futhi uthole ngisho tan enhle. Akusibekele ukufika isizini efudumele kungaba ngokuvamile izinto ezimbili kuphela: ngichithe izinsuku zeholidi futhi ... cellulite. Nikeza eliconsisa indawo "orange ikhasi" ngeke kukusize ngalutho umzamo omkhulu, kodwa ngezinye izikhathi nje kunzima kakhulu ukuqeda le dimples eziyihlazo esikhumbeni bushelelezi. Kanye nokufika kwalolo isizini efudumele, thina ngokushesha wathutha yememori zonke ngempumelelo amakhambi for cellulite. Okuningi izintokazi "eziphambili" achithe isikhathi esiningi sonke isimiso ukuqeda lolu bhubhane.
Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela ukuqeda cellulite ngaphezu kokwanele, futhi kuba ukudla, umoya ohlanzekile, futhi Hydro-massage, futhi nokuvivinya umzimba, nokunye. Njalo indlela kuhle ngendlela yalo. Ukusetshenziswa izinyathelo okuhlangene unika imiphumela emangalisayo, kodwa kuthatha isikhathi, futhi njengenjwayelo awuzange ube ngokwanele. Umsebenzi, izingane, ikhishi ... yini lapho progulochku amahora amabili kulandelwa isigamu sehora ukuzihlikihla ngesimangaliso. Kodwa ungakwazi kuphela ubheke esidlule. Kusasele iminyaka engaphezu kwekhulu edlule, ne enkulu impumelelo esetshenziswa turpentine zokugeza njengoba okuwukuphela kwendlela ukuze silwe cellulite yavela. Mayelana nabo sizobe ukukhuluma.
Njengoba yaziwa, cellulite kuwumphumela microcirculation kahle, eliphumela Ukungadli umzimba e nezicubu ongama adipose. Namuhla, indlela engcono kakhulu yokusiza abantu bahlukane nazo cellulite ubizwa kufanele waqaphela njengoba turpentine okugeza Zalmanova. Baziwa kusukela 1904. Emuva ngalezo zinsuku, lokhu kwelashwa kuye sazibonakalisa njengoba ngesivinini esikhulu, angasetshenziswa ekhaya. Zalmanova yayenziwa ezimbili okufanele akhethe kuzo:. Emulsion turpentine zokugeza 'mhlophe "futhi we" isixazululo ophuzi " Isenzo zokugeza "amhlophe" - dehiscence ka-capillary, "yellow" - zokuhlanjululwa zomzimba.
Ukupheka turpentine okugeza kulula. Ukuze wenze lokhu uzodinga ukuthenga ekhemisi ikhambi esifanele bese uyifaka ukuyokha amanzi. Khumbula, ngeke usebenzise, esikhundleni, turpentine lobuchwepheshe. Lokhu kusho ukuthi kukhona okungalunga ukuthi alimale.
Ukukhethwa zokugeza okusekelwe ukubaluleka blood pressure. Nge kukhuphuke Kunconywa ukuba asebenzise "yellow" turpentine ewayini, namabhati cellulite, ongaphakeme - "amhlophe". Ezimweni lapho ingcindezi igazi ngaphakathi kobubanzi evamile, lilandelwa ngelithi "isixazululo ophuzi" futhi "emulsion elimhlophe" ezihlanganiswe enkulu alinganayo.
Indlela yokwenza turpentine zokugeza? Kule ndaba, futhi, kufanele alandele imithetho ethile. Kunoma ikuphi, inqubo ngamunye noma ekuthuthukiseni inhloso zokwelapha kumele uhambisane udokotela baqhubeka izincomo zayo.
Turpentine ewayini, namabhati cellulite kufanele esikukhompiyutha ngosuku olufanayo. Isikhathi izinqubo ngokuvamile kusukela 15 kuya ku-20, ukuvimbela ngokwanele futhi 10. Izinzuzo le ndlela zingaphezu sobala. Okokuqala, kukhona asikho isidingo sokuya spa ezibizayo, kanye nezikhungo zezokwelapha ezikhethekile izokunikela umphumela ofanayo futhi ngesikhathi esifanayo njengoba turpentine okugeza ekhaya lakho. Kuphela Kulo mBhalo, kuzodingeka ngosuku ukunikeza umzimba wakho emva kwamaminithi ambalwa. Inyanga, futhi - Queen. Kuletha hormone isimo ubuyela umzimba evamile, futhi igazi usule ubuthi zanqwabelana.
Turpentine zokugeza ungavumeli kuphela ukuba ngokushesha futhi unomphela unqobe cellulite, kodwa futhi basize ukuqeda inani elikhulu ngokweqile. Into eyinhloko okufanele icatshangelwe ukuthi zonke izinto ngokulinganisela. Ukuhlukumeza okungalungile, njengoba kunoma yiliphi elinye icala, uma kuziwa imithi.
cellulite Fight kuyadingeka futhi kungenzeka. Ukwazi indlela yokwenza turpentine zokugeza, uzokwazi ukubuya umzimba ukuze ubuhle bawo kanye nentsha. Hlala uphilile!
Ukukhala umbilicus ngayo lapho usana: okuhlukile evamile noma isizathu abe netwetwe?